Bintangor Plywood, Commercial Plywood, Konkrete Kuvaka Plywood - Edlon
Edlon Wood Zvigadzirwa Co, Ltd yakagadzwa muna 2003, iri pakati peiyo HuaiHai hupfumi nzvimbo, yakapfuma mumatanda zvinhu zvekushandisa uye vashandi vane hunyanzvi. Isu tinogara tichitarisa matanda ekugadzirisa matanho mukuvaka akaiswa fenicha uye kugadzira fenicha, Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvine KUSVIKIRA PLYWOOD, FILM FACED PLYWOOD, DoorsKIN PLYWOOD neHPL PLYWOOD, mhando dzakawanda dzemamodi bhodhi zvinosanganisira PETG, ACYLIC, PVC, MELAMINE …… kushandiswa kwakasimba kwehuni matanda kuburikidza nemhando yekutanga, isu tinogara tichivaka zita rakanaka uye rakachena EDLONWOOD, iyo inovimbisa yakatendeseka uye yakakwirira bhizinesi nheyo nevatengi vedu vanokoshesa.
Iyo Laminate panel ndeye sekisheni yekugadzirisa pane hwaro hweplywood, inofukidza kumusoro kwayo neyakagadzika yezvimwe zvigadzirwa kuti isangane nezvakasiyana zvekushandisa. Parizvino, tinogona kupa zvinhu zvakadai seHPL, PVC, PETG, acrylic, Melamine, UV, nezvimwe. Inogona kushandiswa mukumusoro-magumo fenicha, kabhodhi, imba yekugezera, nezvimwe.
Door plywood inoreva iyo plywood yehukuru hwakakosha hunoshandiswa kugadzira pamukova panels. Tinogona kupa zvigadzirwa zvemhando dzakasiyana-siyana, masitayiti uye mapatani maererano nezvinodiwa nevatengi. Saizvozvo, isu tiri kushingairira kugadzira marudzi ese ezvigadzirwa zvitsva, uye kupa vatengi zvigadzirwa zvakanakisa ndicho chinangwa chedu.
Fenicha bhodhi ndiyo inowanzo plywood, inowanzoshandiswa kugadzira fenicha, yakadai sewaradhi, sabhuku, nezvimwe. Inesimba rakanaka uye inobata kumeso, uye kune zvakare chigadzirwa chakakosha, LVL, zvinhu zvinoshandiswa kugadzira mubhedha.
Runhare: 0086- (0) 516-66688198
Kusiyana pakati plywood uye bl ...
Sarudzo yemidziyo, yekutanga ch ...
Melamine paste mapaneri maitiro
Kunyanya kushandiswa kweplywood